श्रीमती माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले जे गरे, त्यसले संसारलाइ चकित बनायो! – Dainik Samchar
March 22, 2021 285
काठमाडौं । श्रीमती माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले जे गरे, त्यसले सबैको होस उडाएको छ । यो घटनाले सबैलाई चकित बनाएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको कानपुरको चकेरीमा एउटा हृदयविदारक घटना घटेको हो । त्यहाँको श्रीमतीको विच्छेदनमा, एक युवकले जे गरे त्यसपछि त्यहाँ हलचल मच्चिएको छ ।एक युवकले श्रीमती नभएको झोकमा आफ्नो निजी भाग फालेका छन् । यसपछि उनले जीवनबाटविाद लिने उद्देश्यले आफैलाई थप क्षति बनाएका छन् । उक्त युवकलाई रगताम्य अवस्थामा परिवारले घटनाको बारेमा प्रहरीलाई खबर गरेको छ । परिवारका सदस्यको सहयोगमा प्रहरीले उक्त युवकलाई हैलट अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
चकेरीका अहिरवान चौकी विजय शुक्लाले दिएको जानकारी अनुसार माविया गाउँ निवासी २६ वर्षीय बीनू सविता मजदुरको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । पाँच वर्ष अघि उनको विवाह बारादेवी निवासी नेहासँग भएको थियो । उनीहरुको अढाई वर्षको छोरो आर्यन पनि छ ।चौकी इन्चार्जले भने कि करीब डेढ महिना अघि पत्नी नेहालाई डेंगू भएको थियो । त्यसपछि उनी उपचारका लागि माइती घर गइन् । उनी अहिलेसम्म घर आएकी छैनन् । बीनूका परिवारका सदस्यहरूले भने कि पत्नीको यस व्यवहारबाट बीनू दुःखी छन् ।
मानसिक रूपमा विचलित पनि भएको परिवारले जनाएको छ । बुधवार बेलुका साँझ उनी अचानक कोठामा गए अनी आफनो निजी भाग मिल्काएका हुन् । उनले घाँटीमा पनि क्षति गराएको खुलेको छ । प्रहरीले उनलाई गम्भीर हालतमा अस्पताल भर्ना गरेको हो । अवस्था एकदम गम्भीर भएको जनाइएको छ ।परिवार, आफन्तले बुहारीले डेढ महिनासम्म माइतीमा बस्दै आएको बताएका छन् । जब उसको छोरो उसकी पत्नीलाई लिन ससुराको घरमा गयो, पत्नी आउन अस्वीकार गरिन् । साथै, उनीले फोनमा कुरा गर्न पनि अस्वीकार गरिन् ।
गत एक महिनादेखि कसैले पनि श्रीमतीको दृष्टिकोण बुझ्न सकेन, जसको कारण बीनु दुखी भएका थिए । उनले कुनै पनि काममा आपत्ति जनाएनन् । ऊ दिन रात आफ्नी श्रीमतीको बारेमा सोच्ने गर्थे तर माइतीमा गएका बेला भएको अपहेलनाका कारण उनी यस्तो अवस्थामा पुगेको अनुमान गरिएको छ । घटना सम्बन्धमा थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
Prevअष्ट्रेलियामा नर्सिङ पेसामा जागिर र तलब यस्तो छ – थाहा पाइराखौ !
Nextमध्यरातमा रंगशालाभित्र धुर्मुस सुन्तली रुनु पर्यो, ऋण लागेपछि भोली बिहानै निस्किदै |
बजार गएकी सोनी का’फ्ले ५ दिनदेखी स’म्पर्क बि’हिन’ खोजिदिन् परिवारको अ’पिल !